Thenga i-Fast Defrosting & Rapid Safety Thawing Tray Plate - Ukuhanjiswa kwamahhala futhi akukho ntela | WoopShop®
Ukusheshisa okusheshayo & Ukuphepha okusheshayo kweThawing Play Plate
Color L M Iphedi labicah S
L M Iphedi labicah S
Ukusheshisa okusheshayo & Ukuphepha okusheshayo kweThawing Play Plate - L ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Igama Into: Defrost Tray
Faka umbala: njengoba isithombe sikhombisa
Usayizi: S: 23 * 16.5 * 0.2cm, M: 29.5 * 20.5 * 0.2cm, L: 35.5 * 20.5 * 0.2cm
Isisindo: S: 210g / M: 320g / L: 350g
Isici: Rapid Defrost Tray, Frozen Defrost
Ngokusebenzisa tukuxhumana kwakhe nokudla okunamacwecwe okuncibilikisa kusetshenziswa izinto nezinqubo ezikhethekile ezinobungani bemvelo, ukudla okufriziwe kuyancibilika ngokushesha
Kulula ukuhlanza! Inqubo ekhethekile yenza ipuleti lokuncibilikisa kube lula ukulihlanza, uwoyela ongeyona induku
Kulula ukuyisebenzisa, ukonga ugesi nokuvikelwa kwemvelo! Akunasidingo sokunye ukutshalwa kwezimali, konga amanzi nogesi
Umgomo: Ipuleti lokuncibilikisa ingxubevange ekhethekile enokushisa okushisayo kwezikhathi ezingama-20,000 XNUMX zezinsimbi ezijwayelekile, kufinyelelwa ukushintshisana ngesivinini esikhulu, kuvumela ukudla okufriziwe ukufeza umphumela osheshayo wokuncibilika kwemvelo
Izinzuzo: isivinini, isikhathi esifushane, singasindisa ngempumelelo isikhathi sokuqala sokukhetha, futhi singagcina ukunambitheka kwasekuqaleni kanye nokudla okunempilo kokudla, impilo nokuhlanzeka. Corrosion ukumelana, ukuphila isikhathi eside
Okumbi: Ngenxa yokusetshenziswa kwezinto ezikhethekile zokuvikela imvelo, intengo izobe iphakeme kancane
Ipuleti le-thaw - ipuleti lokuncibilikisa uma liqhathaniswa nezinye izindlela zokuncibilika
Ijubane lokuncibilikisa elisebenzisa ipuleti elincibilikisayo elisheshayo liphindwe ka-5.6 ijubane lokuncibilika kwempahla ejwayelekile eyenziwe ngobumba.
Ijubane lokuncibilikisa kusetshenziswa ipuleti lokubhula elisheshayo liphindwe izikhathi ezingama-5.6 lelo lempahla ejwayelekile yobumba. Qaphela: I-ceramic ware incibilikiswa cishe imizuzu engama-91 bese ipuleti lokuncibilikisa lincibilika cishe imizuzu eyi-16.
Ngokuncibilikisa okusheshayo, ukucibilikisa ipuleti kungakhixa izakhi nomhluzi enyameni, kunciphise ujusi ochichima lapho ukudla kuncibilikiswa, futhi kugcine okumnandi.
Kulula ukuhlanza! Inqubo ekhethekile yenza ipuleti lokuncibilikisa likwazi ukuligeza kalula futhi alinamatheli emafutheni.
Kulula ukuyisebenzisa, ukonga amandla, nokuvikelwa kwemvelo! Akukho mali eyengeziwe edingekayo yokonga amanzi nogesi.
Ngokuthintana kokudla ngamacwecwe okuncibilikisa kusetshenziswa izinto nezinqubo ezikhethekile ezinobungani bemvelo, ukudla okufriziwe kuyancibilika ngokushesha
Amapayipi abicah awathengwa ngokwahlukana ngenxa yezizathu eziyimodeli. Zidinga ukuthengwa kanye nepuleti lokuncibilikisa. Ngeke sithumele iphedi labicah ngokwehlukana.
1 * Square Thaw Plate （Amapayipi abicah awathengwa ngokuhlukile ngenxa yezizathu eziyimodeli. Zidinga ukuthengwa kanye nepuleti lokuncibilikisa. Ngeke sithumele iphedi labicah ngokwehlukana)
ISpokojnosť AJ ked Tovar neprišiel
Veryyyyyy kuhle, wanelisekile!